Ning Chat box and font — MYSTERY ZILLION
Ning Chat box and font
August 2009 edited December 2009 in Blog
ကျနော် စမ်းလုပ်နေတဲ့ Ning ရဲ့စီဘောက်မှာ (Meebo flash chat အမျိုးအစားပါ) မြန်မာလိုမပေါ်ပဲ လေးထောင့်တုံးတွေပေါ်နေလို့ ပါ ဗျာ .. အသိတစ်ယောက်ပြောတာတော့ EOT ကြေငြာရတယ်ပြောပါတယ် .. ဟုတ်လား မဟုတ်လား သိချင်ပါတယ် .. ဟုတ်ရင်လည်း အသေးစိတ်လေး သိချင်ပါတယ် .. ကူညီပေးကြပါနော် .. :106::106::106:
သိတဲ့လူများ .. ဖြေပေးကြပါဦးလေဗျာ .. (:(( .. ဒီတိုင်းကြီး မဖြေပဲ မနေပါနဲ့ဗျာ
အဲဒီဟာက သူ admin penal ရှိတယ်ထင်တယ်..ကျွန်တော်တို ့တော ့မသုံးဖူးဘူး
Eot ကြေငြာချင်ရင်တော ့လွယ်ပါတယ်..Eot လုပ်ထားတာရှိတယ်..
အဲဒါကို ယူလိုက်ပါခင်ဗျ..အဲဒါ EOT ပါပဲ
အကို ချက်ဘောက်မှာ..ဘယ်လို ထည် ့ရတယ်.
ဘယ်လို သုံးရတဲ ့ဆိုတာတော ့..ကျွန်တော်မသိပါဖူး..
အဲဒီလို ချက်ဘောက်မသုံးဖူးလို ့ပါ... C-box ကို ပဲ သုံးဖူးပါတယ်။ ။
www.gtuonlinefriend.ning.com မှာတော့ chat room ထည့်ထားတယ်ဗျ
GTU ကအပြင်ကချက်ကိုသုံးထားတာ www.cbox.ws လားမသိဘူး
ကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့ flash chat ကမြန်မာလိုမရဘူးထင်တယ်
အင်း .. ဒါဆို ဗျာ .. Ning မှာ မြန်မာလို chat လို့ရမယ့် Chat Room လေးတစ်ခုလောက် မျှကြပါဦးဗျာ .. အဆင်ပြေမယ့်ဟာမျိုး ဗျာ .. ကူညီကြဦးနော် .. ခုလို ဖြေကြားတဲ့လူများ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ...:103::77:
c box ယူသုံးလေဗျာ
ning မှာ ကျွန်တော် ထောင်လိုက်တဲ့ ဆိုဒ်က ပိုစ့်တင်လိုက်ရင် login ၀င်ထားတုန်းပဲမြင်ရပြီး တခြား browser နဲ့ ကိုယ့်ဆိုဒ်ကို ရိုုက်ထည့်ကြည့်လိုက်ရင် ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ ပို့စ်ကို ကော changes လုပ်ထားတာကော မတွေ့ရဘူးခင်ဗျ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် login ပြန်၀င်လိုက်မှ တွေ့ရပါတယ်။ တခြားသူတွေအနေနဲ့ နောက်ဆုံးတင်ခဲ့တဲ့ ပိုစ့်တွေကို ချက်ချင်းမတွေ့ရဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။
နောက်မေးချင်တာတစ်ခုက ning ကိုစထောင်ရင် အီးမေးနဲ့ activate လုပ်ပြီးတဲ့အခါ theme ရွေးတဲ့နေရာရောက်လို့ အောက်က ရွေးချယ်စရာတွေကို ရွေးချယ်ရပါတယ်။ အဲဒီ့ ရွေးချယ်စရာတွေထဲကမှ အောက်ဆုံးက watermark ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာ
ဆိုပြီး လေးခုရှိပါတယ် Default အတိုင်းကတော့ Network name ကိုရွေးပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်သိချင်တာက အဲဒီ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ အောက်ကဟာတွေက ဘာအတွက် ထည့်ပေးထားတာလည်း ဆိုတာသိချင်တာပါ။ အဲဒါတွေက ဘယ်လို အသုံးပြုရတာလည်းဆိုတာကောသိချင်ပါတယ်။
ning original chat box no longer support you of myanmar font.
You have to use third party application webchattr.ning.com.
Haveasign-up there and you will have to wait for approval from admin.
Then, you will get the code. Put it to analyst box. That's all.
That's suchanice chatter and it can also define category or private chat.!
It will appear on every members' profile page.
More info, visit webchattr home page.
PS: It well support of myanmar font and wanna view example, visit http://ucsycyber.ning.com.
ဘယ်လိုထည်.လဲ? သိရင်ပြောကြပါ ။ :77::102:
louisflame wrote: »
www.cbox.ws မှာ register လုပ်ပါ code ပေးလိမ့်မယ် အဲဒီ code ကို Analyst Box ထဲကိုထည့်လိုက်ရင်ရပါပြီ ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ forum တွေမှာ cbox ကသိပ်မမိုက်ဘူးဗျ
သူက blog တွေလောက်ပဲကောင်းတာ